‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान रोकिँदैन’ | नयाँ शक्ति नेपाल
‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान रोकिँदैन’
- २२ जेठ २०७४
संयोजक, आंगिक संगठन, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामलाई कसरी लिनुभएको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अब दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा देश जाँदैछ । पहिलो चरणको निर्वाचन कतिपय कमीकमजोरीका बावजुद सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल स्थापनाको एक वर्ष नपुग्दै निर्वाचनको महासंग्राममा हामफाल्नु आफैंमा गौरवपूर्ण अवसरको रुपमा हामीले लिएका छौं । तर, पार्टी निर्माणको अवस्था संगठनात्मक आधार, निर्वाचन चिन्ह, आर्थिक व्यवस्थापन समयमै निर्वाचनको बारेमा आफ्ना मतदाताहरुलाई सचेत पार्न नसक्नुको कारणले आशातित परिणाम हासिल गर्न सकेनौं । तर, छोटो समयमा भएपनि पूराना पार्टीहरुको धन, गन र डनको बाबजुद पनि निर्वाचन भएका ठाउँहरुमा केही उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौं । हामीले संगठनात्मक कमजोरीका बाबजुद पनि विऊ रोप्ने काम गरेका छौं । अब यसमा टेकेर दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारीमा गम्भीरतापूर्वक लाग्नु सम्पूर्ण अभियन्ताहरुको प्रमुख दायित्व हो । त्यसैले अहिले चारवटा प्रदेशमा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो चरणको भन्दा आशातित परिणाम आउन सक्ने अपेक्षा समेत हामीले लिएका छौं । तसर्थ: पहिलो निर्वाचनको कमीकमजोरीबाट शिक्षा लिएर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ती कमजोरी सच्याउँदै विशेष तयारीका साथमा पार्टी निर्वाचन अभियानमा आशावादको साथमा संलग्न भएको छ । त्यसकारण हामीले यो निर्वाचनमा केही परिणाम हासिल गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास पनि लिएका छौं । कतिपय पूराना पार्टीहरु नयाँ शक्ति पार्टीभन्दा धेरै पहिले जन्मिएका, संसदमा प्रतिनिधित्व पनि गरेको भएता पनि ती पार्टीहरुको भन्दा हाम्रो उपस्थिति प्रभावकारी ढंगले भएको छ । निर्वाचनमा उम्मेदवारी उठाउने र मत प्राप्त गर्ने प्रश्नमा हामी सफल पनि भएका छौं ।
निर्वाचनमा सफलता पाउन नसक्नुमा चिन्हको कुराले पनि केही प्रभाव पारेको हो त आम मतदाताहरुमा ?
निर्वाचनमा पार्टीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको निर्वाचन चिन्ह आँखा राज्यले अपहरण गरेपछि हाम्रो पार्टीको सामू निर्वाचन बहिस्कार गर्ने, स्वतन्त्र हैसियतमा निर्वाचनमा सहभागी हुने वा अन्य कुनै संसदमा रहेका दलहरुसँग सहकार्य गरेर निर्वाचन चिन्हको तालमेल गर्नेभन्दा बाहेक हाम्रो सामू अर्को विकल्प थिएन । हाम्रो पार्टीको संघीय समाजवादी फोरमसँग पार्टी एकताका लागि सैद्धान्तिक, वैचारिक, प्राविधिक बहस पनि भइरहेको थियो । यसै सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको हुँदा विद्यमान कानूनमा भएको प्रावधानका आधारमा संघीय समाजवादी फोरमको निर्वाचन चिन्ह लिई दुई पार्टी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने विकल्प हामीले रोज्यौं । तसर्थ हामीले छोटो समयमा अर्को पार्टीको निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनावमा जाँदा समयको अभाव, निर्वाचन चिन्ह जनतामा पुर्‍याउन नसक्नु, निर्वाचन चिन्हबारे जनतामा केही अन्यौल पैदा हुनु र तालमेलमा उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारणले पनि निर्वाचन परिणाम अपेक्षाभन्दा केही कम भएको स्वाभाविकै हो । यदि ‘आँखा’ चिन्ह हामीले पाएका हुन्थ्यौं भने परिणाम केही सोचेअनुसार नै हुने थियो । किनकि छोटो समयमा नै आँखा चिन्ह जनसमुदायमा स्थापित भइसकेको थियो । नेपाली कांग्रेसको रुख २०१५ सालदेखि, एमालेको सूर्य २०४३ सालदेखि माओवादी केन्द्रको गोलाकार भित्रको हसिया हथौडा २०६४ सालदेखि जनसमुदायमा स्थापित छ । तर सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले छोटो समयमा स्थापित हाम्रो आँखा चिन्हलाई हेर्न दिन चाहेन । जसले गर्दाखेरी तालमेलमा जाँदा केही समस्या पैदा भएर परिणाममा कमजोरी अवस्था देखापर्न गयो ।
पहिलो चरणको अनुभव पनि लिनुभयो, तालमेलमा आउने समस्या पनि बुझ्नुभयो र अब त हातले समातेको मशाल चिन्ह पनि स्थापित भएको छ । यस्तो अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल कसरी हुन्छ ? र नयाँ शक्ति पार्टीले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी सफलता पाउन के कस्ता कार्यहरु गर्नेछ ?
पहिलो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचन चिन्हको प्रश्नलाई लिएर पहाडिया मतदाताहरुमा केही अन्यौलता भने जरुर देखा पर्न गयो । मशाल चुनाव चिन्हको पहिचान गराउनै कठीन भयो । तर अबको निर्वाचनमा चुनाव चिन्हलाई जनतामा पुर्‍याउन मधेसमा त्यति जटील नहोला, पहाडमा केही समस्याहरु फेरि पनि पर्न सक्छन् । तर, समय भएको हुनाले जनतामा यसको प्रचार गर्ने कुरामा अलि सजिलो पर्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टीले जनतामा आफ्नो एजेन्डा, नीति तथा कार्यक्रम लैजान र स्थानीय तहमा जनसमुदायको समस्याहरुलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्नका लागि एक नम्बर प्रदेशले आफ्नो विशेषतामा अलग प्रतिवद्धतापत्र पनि जारी गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन जनताको दैनिकीसँग गाँसिएको हुनाले जनताको जीवन र स्वार्थसँग गाँसिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दैनिक मुद्दामामिला, सामाजिक कार्यहरु, बाटोघाटो, पुल पुलेसा, चौतारो, लगायतका जनसरोकारका विषयहरुलाई प्राथमिकताको साथमा पार्टीले उठाउने नीति बनाएको छ । मूलत: यो पूरानो स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएर स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो । यसले जनताका दैनिक परिआउने समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेर जानुपर्ने भएको हुनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामीले स्थानीय विशेषतामा एजेन्डाहरुलाई वैज्ञानिक, वस्तुवादी ढंगले अघि बढाउनेछौं । विगतमा अरु पार्टीहरुले कुरा धेरै गरे, हामी कुरा होइन, जनतालाई भनेका कुराहरु पूरा गर्न चाहन्छौं । आजको नेपालको मुख्य आवश्यकता भनेको विकास र समृद्धि नै हो । राजनीतिक क्रान्तिको एउटा युग समापन भएर आर्थिक क्रान्तिको युगमा हामी प्रवेश गरेका छौं । अब राजनीतिका पूराना नारा दिएर जनसमुदायले विश्वास गर्ने अवस्था छैन । त्यसो भएको हुनाले जनता र राष्ट्रको आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर हामीले नारा र कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । चुस्त जनआधारित संगठन, जनतामा भिजेका नेता र कार्यकर्ताहरु, समुन्नत समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समग्र पार्टीपंक्ति एकढिक्का भएर अबको निर्वाचनमा आफूलाई पेश गर्नु आवश्यक छ । नारा दिएकै भरमा नेपाली जनताले हामीमाथि विश्वास गर्ने स्थिति अब छैन । सिंगो पंक्ति फेरि एकपटक एकीकृत र संगठित भएर जनसमुदायको सेवा गर्नको निमित्त त्याग, तपस्याको बाटोमा फेरि एकपटक होमिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले समृद्धिको युगीन बाटोमा अघि बढ्ने हो भने नयाँ विचार, नयाँ विज्ञान, नयाँ संगठन, नयाँ कार्यशैली, नयाँ संगठनात्मक प्रणाली अपनाएर मात्रै हामीले आफ्नो गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्छौं ।
नयाँ शक्ति पार्टी स्थापनादेखि पहिलो चरणको निर्वाचनअघिसम्म आम जनताको आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो, तर निर्वाचन परिणाम हेर्दा पूरानै शक्तिप्रति जनताले अभिमत व्यक्त गरेको देखियो । यसको खास कारण के होला ?
नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापनाकालमा हामीले अगाडि सारेको एजेन्डाप्रति आकर्षण भएर यो पार्टीमा नेपाली समाजको ठूलो पंक्ति सामेल हुन पुग्यो । त्यो पंक्ति राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संघ–संस्था, कर्मचारीतन्त्र आदि क्षेत्रबाट पार्टीमा प्रवेश गर्‍यो । रुपमा पार्टीको आकार ठूलो देखिएपनि सारमा पार्टीको आकारलाई स्थानीय तहसम्म संरचना निर्माण गर्न सकेनौं । पार्टी निर्माणको छोटो समय, संगठनकर्ताको अभाव, स्पष्ट वैचारिक राजनीतिक चेतना अभियन्ताहरुमा नहुनु, जनतामा गएर पार्टीको विचारलाई प्रवाहित गर्न नसक्नु, पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरुको कमी, आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या आदि कारणले स्थानीय तहसम्म पार्टी संगठनलाई विस्तार गर्न सकेनौं । पूराना शक्तिहरु पहिल्यैदेखि नै जनतामा संगठित शक्ति बनाएर बसेका थिए । केही सामाजिक आधार उनीहरुसँग विद्यमान थियो । राज्यसत्ता र स्थानीय तहमा कैयौं सामाजिक अभियानहरुमा उनीहरुको संलग्नता समेत थियो । जसको कारणले जनसमुदायले उनीहरुको पक्षमा अभिमत जाहेर गरे । जो साथमा रहन्छ, स्वाभाविक रुपमा, उसलाई जनताको समर्थन रहन्छ । नयाँ शक्ति पार्टी एजेन्डाको रुपमा उत्कृष्ट थियो । तर पार्टी संगठनको प्रश्नमा निर्वाचन जित्ने हैसियतमा पुगिसकेको थिएन । कैयौं अभियन्ताहरु पार्टी केन्द्र, संघीय परिषद, प्रदेश परिषद हुँदाहुँदै पनि समर्पित भएर जनतामा गएर संगठन निर्माण गर्ने कुरामा त्यति इच्छुक भएको देखिएन । यी आदि कारणले हामीले आशातित परिणाम हासिल गर्न सकेनौं । यसको समाधान भनेको पार्टीमा शुद्धीकरण अभियान हो । दोस्रो कुरो नयाँ शक्ति पार्टीमा ‘राजनीतिकरण’, ‘पार्टीकरण’ पनि गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । तबमात्र आगामी दिनहरुमा हाम्रो पार्टी मजबुत वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाउनेछ ।
आगामी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिको आंगिक संगठनले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ?
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका मातहतमा २४ वटा आंगिक तथा पेशागत संगठनहरु छन् । ती सबै संगठनहरु प्रारम्भिक संरचनाका भएको हुनाले हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको संगठन बन्न अझै बाँकी छ । बनेको संगठनको सापेक्षतामा आंगिक संगठनका सबै सदस्यहरुले पहिलो चरणको निर्वाचनमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुभयो । अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सबै आंगिक तथा पेशागत संगठनका साथीहरु दृढतापूर्वक उम्मेदवारको रुपमा, निर्वाचन परिचालकको रुपमा सक्रियतापूर्वक लाग्नुहुनेछ । यी संगठनहरुले आफ्नो विशेषता र सापेक्षताअनुसार जनसमुदायको घरदैलोमा गएर पार्टीको एजेन्डा पुर्‍याउने, उम्मेदवारलाई आर्थिक, नैतिक, भौतिक सहयोग जुटाउने काम गर्नेछन् । तसर्थ आगिंक संगठनहरुले पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा अझ बढी सक्रियतालाई चारैवटा प्रदेशमा बढाउनेछन् र आफ्ना उम्मेद्वारहरुलाई जिताउनको निमित्त पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
अब वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको यात्रा कसरी अघि बढ्छ ?
हामी नेपालमा नेपाली राजनीतिको वैकल्पिक र मौलिक धारा निर्माण गर्न चाहन्छौं । पुँजीवाद र समाजवादका सकारात्मक कुराहरु, आजसम्मका ज्ञान विज्ञानका आविस्कारहरु, पूर्वीय र पश्चिमा दर्शनका सकारात्मक कुराहरु र आजको सूचना, प्रविधि र विज्ञानले पारेको सकारात्मक भौतिक विकासका कुराहरुलाई हामी नेपाली राजनीतिमा स्थापित गर्न चाहन्छौं । पूरानो राजनीतिक क्रान्तिको युग समाप्त भएर समृद्धि, समावेशीताको युग सुरु भएको नेपाली समाजको आजको सन्दर्भमा हामीले जनतामा आधारित व्यापक सञ्जाल निर्माण भएको राजनीतिक पार्टी बनाउन चाहन्छौं । यो पार्टी भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, अलोकतान्त्रिक प्रणालीबाट मुक्त भएको होस् । समाजवादी विचार, आदर्श संस्कृतिबाट ओतप्रोत भएको होस् । उन्नत प्रकारको संस्कृति, सदाचार, सहजीवन, आत्मसम्मान, सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य, समानतामा आधारित आर्थिक र राजनीतिक प्रणाली बनोस् भन्ने हामी चाहन्छौं । त्यसैले यसैको लागि नयाँ शक्ति पार्टी हामीले निर्माण गरेका छौं । छोटो समयमा नै मत परिणामको हिसावले पनि हामी चौथो शक्ति बनेका छौं । यसैले आगामी दिनमा देशको पहिलो वैकल्पिक शक्ति बन्नको लागि पार्टीको सबै तहलाई जनतासँग जोड्ने, जनताबाट सिक्ने र जनतालाई सिकाउने, जनसमुदायसँग पानी र माछाजस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने, विज्ञान प्रविधिलाई पनि नछोड्ने तर जनसमुदायसँगको हार्दिक सम्बन्धलाई पनि नतोड्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिँदै अबका दिनहरुमा नयाँ शक्ति पार्टीले निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दै देशको पहिलो पार्टी निर्माण गर्नको लागि पहलकदमी बढाउनेछ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान केही कठीन जरुर हुन्छ तर हाम्रो यो अभियान रोकिँदैन ।